109 jir u dabaaldegtey gabarnimadeedii mudadaasi oo aan hoodi la oran – SBC
109 jir u dabaaldegtey gabarnimadeedii mudadaasi oo aan hoodi la oran
Posted by Webmaster on October 18, 2012 Comments
Iyadoo ku faraxsan Clara Meadmore in ay wali tahay gabar aan hoodi la oran oo lugaheeda la kala qaadin (bikro) ayay u dabaaldegtey da’adii 109-aad bishan October, waxaana arintan ay shaaca ka qaaday sanakdii 2008-dii oo ay xiligaasi u dabaaldegay da’da 105 sano.
Clara waxay sheegtey inaanay waligeed guursan ama aanay sameyn boodbood sariir iyadoo sheegtey in ay tahay sidii ay hooyadeed ku dhashay oo ay ka caagan tahay faraka ciyaarka ragga iyo hablaha dhexmara, iyadoo sheegtey in nolasheeda intii badneyd ay aheyd qof aad u mashquul badanyed ayna maaro iyo taag u hayn wax sheeko ah.
Waa Clara Meadmore oo Warkan ka soo yeeray ku faraxsan
Clara oo degan deegaanka Perranporth, ee gobolka Cornwall ee dhaca Koonfurta Galbeed ee England ayaa sheegtey in xitaa aanay waligeed yeelan wiil saaxiib ah, waxaana iyadoo arinkaasi ka sheekaynaysa tiri “Waligey ma aanay yeelan wiil saaxiib ah, waligey nafteyda kuma dhibin inaan mashquul galiyo, marka aad gabar tahay waxa kaliya ee aad sariir bood bood la gali kartaa waa ninkaaga, anigu wax guur ah ma sameyn”.
Clara waxay sheegtey in ay jireen rag badan oo ay is garanayeen balse aanay jirin damac dheeraad ah oo ka galay in ay ilaa badda gunteeda isla tagaan,.
Clara Meadmore oo xiligan haysta rikoorka haweenayda gabarnimadeeda aan wali taaban ee dalka UK waxay sheegtey in xiligan isbadal uu ku dhacay dhalinyarada.
Clara Meadmore oo xiligan ah Gashaanti nin yac iska tiri
“Hada wax kasta waxay u muuqdaan dhaqso ama boobsiis, ma garanayo waxa ay dhalin badan u sameynayaan waxyaabaha qaarkodo ama waxa ka qaldan, waan hubaa oo taasi mid isbadal ah” ayey tiri Clara oo walaac ka muujisay dhalinyarada xiligan joogta.
Clara Meadmore oo ahaan jirtey xogeyn (secretary) waxay sheegtey in xiligeedii ay dhalinyarada aheyd sanadihii 1920-tameeyadii iyo sodomeeyadii 1930s ciyaaraha sariiruhu ay bulshadeeda u ahaayeen oo kaliya in la is guursado balse waxay sheegtey in haatan dhaqanka bulshada ay ka soo jeedo uu aad isu badaley.
Miss Meadmore ayaa ku dhalatey magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka UK sanadkii 1903-dii waxay dunida u soo joogtey isbadalo badan waxay sheegtey in ay maqaleysay sheekadii markabkii degay ee Titanic sanadkii 1912, waxay u soo joogtey dagaalkii koowaad ee aduunka iyo kii labaad.
Sanadka ay dhalatey ee 1903, waa sanadkii Cuba ay Mareykanka ku wareejisay gacanka Guantanamo Bay, waa sanadkii la aasaasay shirkada Pepsi Cola, sidoo kale shirkada gawaarida ee Ford ayaa la aasaasay.
Clara Meadmore waxay ku tilmaamtey arinteeda inay tahay guul xaga nolasha ah oo ay ka doorbiday inay guursato, iyadoo xustey in aaminsan tahay cimriga u dheeraaday nolasheeda inay tahay in ay meel iska saartey in guursato, go’aankaasi oo ay qaadatey iyadoo 12 sano jir iyadoo ah.
“Tiro ka dhawr jeer ayaa la iisoo gudbiyey dalab guur, laakiin dhamaantood dhabarka ayaan xijiyey waayo ma dooneyn inaan mashquul noqdo” ayay hadalkeeda ku dartey Clara oo sheegtey in ay ka doorbiday in intii aay xanaaneyn laheyd Ninkii guursada inay wax akhriso, wax karsato, dhir beerto, socoto waqtiga u soo hara ay dhageysato Raadiyaha gaar ahaan barnaamijyada haweenka ka hadlaya.
Halkan guji oo eeg Facebook-ga Haweenaydan 109 sano jirka ah
Eng waberi says:
Ha iso marin adiga o marti ah